ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Thu, 01/31/2019 - 07:31 -- adminDep
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ German Development Cooperation (GIZ) ရုံးမှ Co- Director ဖြစ်သူ Ms. Wilasinee Poonuchaphai ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန် မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ ဦးမျိုးသန့်ဖေအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် Industrial Bank of Korea, Yangon Representative Office ၏ Chief Representative ဖြစ်သူ Mr. Kim Taekyung ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် Eurocham Myanmar မှ Executive Director ဖြစ်သူ Mr. Marc de La Founchardiere ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မဲခေါင် - ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးနှစ်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ပေးနိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Chen Hai ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ (၁၀) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်(ယမကာ) ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊ ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကူမင်းရွှေချိုက် စီးပွားကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌဖြစ်သူ Mr. Wang Wen Tao ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tim Enderlin ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ